I-Semalt ichaza indlela i-Google 'Imeyili Markup' eyenza ngayo Ama-Transactional Emails Phuma
I-imeyili Markup ichazwa njengendlela yokucushwa kwedatha ecatshangelwe kahle eyenzaUhlobo oluthile lwe-imeyili lubonisa okuqukethwe kangcono. Ukubhaliswa okufanele kanye nenhlangano yokuqukethwe kwe-imeyli emakwe kuyobaukukunikeza ithuba lokuqoqa idatha eyengeziwe futhi ufinyelele amakhasimende kuzicelo ze-Google ezifana nekhalenda noma ibhokisi lokungenayo.
Ngomongo we-e-commerce, lokhu kuhilela ukuthumela nokuqinisekisaIzaziso zingathola ukuphathwa okuyingqayizivele ebhokisini le-imeyili, okuthuthukisa isipiliyoni somsebenzisi. UJack Miller, ochwepheshe be i-Semalt Izinsizakalo zeDivaysi zichaza izici zokusebenzisa i-imeyili markups - wild jackpots casino promo code.
I-Email Markup yokuqinisekiswa kwe-oda
Ngaphansi kwesibonelo se-Linking Data (JSON-LD) eqala nge-script HTMLithegi yesimo se- "application / ld-json" uhlobo:
Isinyathelo esilandelayo sibonisa amaphuzu engeziwe engeziwe abelana ngedatha nesistimuokuhumusha ulwazi oluhlelekile:
Ngisho ngaphandle kwe-JSON, kufanele kube lula ukuqonda lokhoumuntu uthenge "umkhiqizo othile oyingqayizivele" kusuka ku- "SomeDistributor.com" nge $ 60.
Izakhiwo ezilandelayo ziyadingeka ukuze i-Email Markup isebenze ukuqinisekiswa kwe-oda:
inombolo ye-oda - ikhombisa ukuhlonza umdayisi
I-PriceCurrency - isebenzisa i-ISO 4217 ifomethi yamakhophi amathathu
Umthengisi - igama lenhlangano noma umuntu
Ukunikezwa okumukelwe - kuhlanganisa intengo, ukulinganisa, isigaba nokunye okuningi komkhiqizo owathengiwe
I-imeyili Markup nayo inezindawo eziningi eziphakanyisiwe nezakhethwaukuthenga imilayezo yokuqinisekisa.
I-Email Markup yezaziso zokuthumela
Isixwayiso sokuthutha singabonakaliswa ngokufaka noma i-JSON-LD noma i-microdataku-template ye-HTML ye-imeyili njengoba kuboniswe kusibonelo ngezansi:
Isibonelo sibonisa kuphela izakhiwo ezidingekayo, kodwa kufaka phakathi i-imeyili ye-odaUkumaketha, inqwaba yezinto ezingaphezulu zingezwa ukuze kuthuthukiswe isipiliyoni somthengi. Lokhu kufaka phakathi i-URL yokulandelela kanye nenombolo yokulandelelaicacisa ikhodi yokulandela yokuphatha futhi udale isixhumanisi sephakheji yethrekhi ku-Gmail noma i-Google ibhokisi ngokulandelana.
Yikuphi abathengi abazobona imibiko yakho ethuthukisiwe?
Labo abathengi ebhokisini lokungenayo le-Google bazovuna izinzuzo ezinhle ukungenelela kwe-imeyili kaMarkup.Njengoba i-Gmail isetshenziswe ngabantu abangaphezu kwezigidi eziyi-1, ukuthuthukisa imilayezo ku-Gmail kunabathengi abaningi abanakho.
Abathumeli ababhalisiwe kuphela bangajabulela i-imeyili Markup. I-Google idinga lokhu okulandelayo ukubhalisa umsebenzisi:
Ukuqinisekiswa komlayezo usebenzisa i-Keys Domain ekhonjisiwe Imeyili noma i-Sender Policy Framework
Iphutha le-imeyili yamahhala
Izikhalazo ezihlobene nogaxekile kufanele zibe ngaphansi
Umlando wokuthumela ama-imeyili angamakhulu ngosuku ngosuku lwamakheli e-Gmail
Yonke imiyalezo kufanele ithunyelwe kusuka ekhelini elimisiwe le-imeyli
Kumelwe uhlangabezane neziqondiso ezibekwa yi-Gmail Bulk Sender
Iklayenti enolwazi cishe lizoba iklayenti elijabule. Ukuthengwa kwe-intanethi kulindelekeukuxhumana nabathengisi uma umkhiqizo uhlelwe futhi uthunyelwa. Iningi labathengisi bavame ukuthumela ukuqinisekiswa okuphelele futhiukulethwa kwezixwayiso zama-imeyili. Noma kunjalo, esimweni sezinkampani ezinkulu noma eziphakathi, kwenezela ubuningi bezinhlelo ezihleliweimakethe ingaba ngcono kulawo ma-imeyili kwabanye abathengi.